PHP Meetup Nove 209 - Saturngod
PHP Meetup Nove 209
Posted on Updated November 4, 2009 November 4, 2009 by saturngod
တော်တော်ကောင်းတဲ့ ပွဲပဲ။ လူကတော့ အများကြီးတော့ မလာဘူး။ iPhone နဲက Google Android အကြောင်းတော့ ကောင်းကောင်းလေး သိလိုက်ရတယ်။ နောက်ပြီး opengap ဆိုတာလေးပါ အဆစ်သိလိုက်ရတာ တန်သွားတယ်။ လုပ်တဲ့နေရာကတော့ Singapore Microsoft Office မှာပါ။ NTUC 22 ထပ်မှာ လုပ်တာပါ။ ရယ်တော့ရယ်ရတယ်နော်။ iPhone နဲ့ Google Android ပြိုင်တာ Microsoft Office ရုံးမှာဆိုတော့။
Microsoft ကလည်း သူတို့ product အသစ်တစ်ခုကို မိတ်ဆက်သွားပါတယ်။ Website Spark အကြောင်းပြောသွားတယ်။ ကျွန်တော်နဲ့ MS က မသက်ဆိုင်တော့ သလိုဖြစ်တော့ ကျွန်တော်လည်း သူ့ site ကိုသွားပြီး မစမ်းရသေးဘူး။ company အသေးလေးတွေအတွက် လို့တော့ ပြောတာပဲ။ သိချင်ရင်တော့ http://www.microsoft.com/web/websitespark မှာ သွားကြည့်လို့ရပါတယ်။
iPhone အတွက် app တွေရေးတော့မယ်ဆိုရင်တော့ 2.5 GB SDK ကို download ချဖို့လိုပါတယ်။ နောက်ပြီး Mac OS X လိုတယ်။ iPhone သို့မဟုတ် iPodTouch ရှိရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့။ iPhone Developer License ဈေးကတော့ ၁ နှစ်ကို $99 ပေးရပါတယ်။ ဒါမှသာ apple store မှာ ရောင်းချခွင့်ရမှာပါ။ ဈေးကတော့ မနည်းဘူးနော်။ iPhone Developer License ရှိရင် iPhone Development နဲ့ပတ်သက်ပြီး support ရနိုင်ပါတယ်။ iPhone Development ကတော့ MVC pattern ပေါ်မှာပဲ အခြေခံထားပြီးတော့ JSON ကို built in support လုပ်ပါတယ်။ SOAP ကိုတော့ 3rd Party သွင်းမှပဲရပါမယ်။ Apple Store မှာ 50K+ app တွေ iPhone အတွက်ရှိပါတယ်။ Apple Sotre မှာရောင်းမယ်ဆိုရင် bank account ကို SWIFT ယူထားရပါမယ်။ တကယ်လို့ စိတ်ဝင်စားတယ် ထပ်သိချင်သေးရင်တော့ အောက်က slide မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Native Phone Development 101
View more documents from Sasmito Adibowo.
လူတိုင်းသိပြီသားဖြစ်တဲ့ Free & Opensource ပါ။ Java နဲ့ပဲ ရေးရတာပါ။ Android မှာ background အနေနဲ့ program တွေကို run ထားလို့ရပါတယ်။ iPhone မှာတော့ မရဘူးလေ။ နောက်ပြီး SDK က Windows, Linux ကော Mac မှာပါ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ Android Development အတွက် MOTODEV studio ဆိုတာကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ လက်ရှိ Android သုံးထားတဲ့ Phone တွေကတော့
Dream (G1, Android Dev Phone 1), Magic (Ion), Hero, Tattoo
တို့ပါ။ Android မှာ GUI app,non-GUI app, background service တို့အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး အခြား app တွေကိုလည်း လှမ်းခေါ်ပြီး အသုံးပြုနိုင်တယ်။ J2ME တတ်ကျွမ်းထားရင်တော့ တော်တော်လေး အဆင်ပြေပါတယ်။ လက်ရှိ market place တွေကတော့
တို့ပါ။ Google Market ကတော့ ၁ နှစ်ကို $25 ပေးရပါတယ်။ iPhone ထက်စာရင် အများကြီးသက်သာပါတယ်။ သေသေချာချာ ထပ်သိချင်သေးရင်တော့ ဒီ slide လေးကို ကြည့်လိုက်ပါ။ http://bit.ly/android_php
View more documents from Philosophy in Programming Society.
« How to Compare Linux Distro ? Zawgyi 2008 Keyboard for Mac »
If you are interested in Google Android developments, I will send you an invite to join CodeAndroid events whenever there is one.
I don’t interested in Mobile Development,now. It’s in my future list 😀
How to Compare Linux Distro ?